Iyi yeAsia Nhema Bear inoda Omelet, Facebook, uye Tourism
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Thailand Kuputsa Nhau » Iyi yeAsia Nhema Bear inoda Omelet, Facebook, uye Tourism
Kufamba kwekushanya • Culinary • tsika nemagariro • Hospitality Industry • nhau • Thailand Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Trending Now • Akasiyana Nhau
Khao Yai bere nhema rinotevera mhino dzake
Pachitoro chekudya chiri paPha Trom Jai mawere muKai Yai National Park, vhidhiyo yebheya dema reAsia rakakweverwa kunhuwirira kweiyo omelette yekubika yakaenda hutachiona.
Zvese zvaitora kwaive kune mumwe munhu anga atora bere pavhidhiyo kuti aritumire pasocial media kukonzeresa vashanyi kuti nzvimbo yacho ive chikamu chezuva ravo rekukanganisa zvirongwa.
Saka vashanyi vazhinji vanga vachisvika zvekuti sabhuku wepaka aifanira kudzikamisa huwandu hwenzvimbo iyoyo panguva imwechete.
Khao Yai inonyatso kuzivikanwa sezvo yaionekwa mufirimu raLeonardo Dicaprio, "The Beach."
Vashanyi vazhinji vakaenda padombo rePha Trom Jai, uye vazhinji vacho vakati vaona chinyorwa chepaFacebook nezvebheya dema reAsia iro rakakwezvwa neomelette pane imwe nzvimbo yekudyira padombo, uye vakaziva kuti dombo raizivikanwa nekuda kwayo nzvimbo dzinoyevedza panguva yemvura, saka vakafunga kuita zuva racho.
Mifananidzo yebere dema reAsia yakapararira semoto wemusango uye yakatungamira ku "Khao Yai Fever," akadaro VaAdisak Pusitwongsanuyut, mukuru weKai Yai National Park.
Akataura kuti vakaita danho rekuganhurira vashanyi kumawere mushure mekuona kuwedzera kwakanyanya kwevashanyi kwakwezverwa kunzvimbo iyi.
Sabhuku ari kudzikamisa huwandu hwevashanyi kunzvimbo iyi mupaki yenyika sezvo "Khao Yai Fever" pane vezvenhau iri kukurudzira vanhu kudirana mune zvakasikwa zvekushanyirwa uye nekuda kwekuwedzera kwevanhu, kuri kukwidza kunetseka nezve zvinogona kuitika Kunyuka nekupararira kwecovid19.
Pamawere, huwandu hwemotokari dzevashanyi hwaive hushoma ku30, iyo yemidhudhudhu yevashanyi kusvika makumi mashanu, uye yemabhasikoro evashanyi kusvika makumi matatu panguva, akadaro, kubva Muvhuro kusvika Chishanu. Pakupera kwevhiki nemazororo eruzhinji, ayo anowanzoona kuwanda kwevashanyi, maawa ekuvhura epaki akakamurwa kuita mashanu nguva nzvimbo dzinogona kuongororwa nevakuru vepaki uye kusarudza chero nguva kuti ingani mota dzinobvumidzwa mukati menguva yega yega.
Khao Yai maawa mashoma kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kweBangkok uye anoonekwa mufirimu "The Beach." Sezvineiwo, nyeredzi ye "Mhenderekedzo yegungwa," Leonardo DiCaprio, akaenderera mberi nekugadzira bhaisikopo rine zita rekuti "Revhizheni," bhaisikopo remunhu wekumuganhu akasiyiwa achinzi afa mushure mekukuvadzwa nebere rinotyisa. Basa raakakunda Oscar yake yekutanga saActor Best, mushure mekurima mimwe mibairo 101 kubva pamasarudzo 252.
Iri sango nehuswa hwe Khao yai nyika park inosvika zviuru zviviri zvemakiromita uye inozivikanwa nemakiromita makumi mashanu emigwagwa yekukwira uye yebhasikoro uye mapopoma akanaka.